In ezinkantini iqukethe eziningi fibre, i-potassium, i-calcium, i-phosphorus, amaminerali nama-amino acid kanye amavithamini. Basuke esikuthola kalula kakhulu umzimba futhi babe ukunambitheka omuhle. Ngakho-ke isobho recipe zucchini kuyingxenye ebalulekile nje kuphela ukudla kwabantwana, kodwa imenyu kubalulekile ukuba abantu abaphethwe ukuqunjelwa. Ngenxa yalo eliphansi kakhulu ikhalori isobho recipe zucchini futhi ethandwa kakhulu ekulungiseleleni ukudla for kwesisindo.
Ukuze silungiselele lokhu isobho udinga ukuthatha 200 amagremu zucchini, amazambane ezimbili ezincane, wezipuni eziyisithupha irayisi, isanqante namalitha nengxenye yamanzi. Ngo isobho wengeze ezimbili wezipuni omnqumo (linseed etholakalayo) uwoyela, amakhambi fresh and usawoti kancane ukunambitha. Kufanele uqale ikhasi zucchini kanye namazambane. Okokuqala ngamanzi abilayo, wehlisa amazambane Diced, bese ufaka kuya irayisi. Zucchini futhi Diced futhi emva irayisi yengezwe amanzi abilayo.
Izaqathi grate kangcono, kodwa ungakwazi sibe yimichilo amancane, enezele ebhodweni. Ngaphambi kokuphela ukupheka, lapho imifino baye ithambe, engeza usawoti kanye izinongo. Ngaphambi sikhonza isobho wathela amafutha omnqumo ufafaze amakhambi fresh. Lokhu isobho recipe zucchini akuyona kuphela wusizo ekudleni, kodwa namanje esihlwabusayo kakhulu futhi kwanelise.
Kungenzeka futhi ukupheka isobho. Ukuze kubalulekile ukuthatha ilitha lamanzi, isigamu ikhilo anyanisi, eyodwa onion, dill, ephansi fat yogurt, umpe eyodwa lemon eyodwa isipuni amafutha omnqumo. Courgettes kufanele uhlukane isikhumba, asuse kuzo zonke izimbewu, amaqhafuqhafu nquma bese uphonsa singene amanzi abilayo. Pheka ngokwanele imizuzu 5 ke ususa emlilweni futhi epholile.
Anyanisi zihlanzekile, Chop kanye sikadali ngamafutha omnqumo. anyanisi ethosiwe kanye zucchini abilisiwe wafaka blender, engeza nendebe umhluzi nquma bonke. Khona-ke, ngo-umhluzi esisele ukubeka sauce kwaphumela, uhlanganise kahle bese efakwa amahora amabili in the esiqandisini. Ngemva isobho selupholile, wayendlala phezu amapuleti, lapho udinga ukwengeza isipuni esigcwele yogurt, kancane isibambo kalamula parsley oqoshiwe. Lokhu isobho recipe zucchini kuyinto enhle cishe nanoma yokudla.
Kulezi imifino ewusizo kakhulu, enjengamakhiwane zucchini, ingalungiswa in a inqwaba izitsha ezahlukene. Ngokwesibonelo, kukhona esihlwabusayo kakhulu iresiphi Casserole of zucchini. It is ngaphambilini ehlutshiwe zucchini, uthathe tincetu bese Fry kwabo kusuka zombili. Pheka kutsho yenkomo, ukuxuba ngayo onion oqoshiwe futhi amaqanda aluhlaza, usawoti kanye pepper ukunambitha. Mark epanini, nivame ngamafutha, ufafaze breadcrumbs phansi, bese uyibeke izingqimba eziningana courgettes kanye nengulube.
Zonke angabekwa, wabeka phezu tincetu utamatisi fresh, uthele ukhilimu omuncu, bhotela ufafaze breadcrumbs. Ubhake kuhovini kufanele kube. Ngaphambi sikhonza Casserole Imi zibe yizicucu ezine, ukubeka endishini, uthele ukhilimu omuncu ufafaze imifino oqoshiwe. Futhi, cishe wonke owesifazane arsenal yayo okumnandi squash caviar.
Nangu omunye walabo zokupheka. Sidinga ukuthatha ngamakhilogremu amathathu anyanisi, eyodwa kilogram izaqathe kanye anyanisi, isipuni utamatisi unama. Zucchini, anyanisi kanye izaqathe kudingeka ikhasi futhi Chop. Umkhiqizo ngamunye ngamunye kufanele kube gazinga kancane. Khona-ke ake kubo bonke ngokusebenzisa grinder inyama, wayesezibeka sikadali imizuzu 40-45. Ekupheleni udinga ukwengeza utamatisi unama, usawoti kanye pepper ukunambitha. Khona-ke mass kuyadingeka ukuze akuqede endaweni blender. Amaqanda kule iresiphi futhi ungakwazi ukugcina ebusika. Ngenxa yale njongo kubalulekile imenze abilayo epanini, bese ukubola zibe izimbiza inzalo.
Ungahlala kanjani ukupheka macaroni nezitini noshizi
Uju zokudla: sikadali izinhlanzi ukhilimu omuncu
I ukuzilibazisa isikhungo "Lumivaara" (Karelia): kuzibuyekezo, izintengo
Wireless: lokho kuba ubuchwepheshe bama-computer?